Faa'iidooyinka ay leedahay Suuq geynta Shirkadaha | Martech Zone
Forrester wuxuu saadaaliyay in qarashka kuxiran ee suuq geynta ay kori doonaan ilaa $ 4 bilyan sanadka 2014, kuna kordhayaan heerka kobaca sanadlaha ah ee 16%. Mid ka mid ah go'aannadii aan goor hore qaadannay Wareeg Press waxay ahayd in laga dhigo isticmaale kasta mid gacansaar la leh. Habkaas, sida emayllada loo soo diray, haddii akhriste uu isdiiwaangeliyo ka dib markii uu gujinayo awoodda ku xiran xiriiriyaha, qofka emailka diraya waa la abaalmariyey. Tani waa istiraatiijiyad cirka isku shareertay oo leh astaamo sida DropBox… Halkaas oo isticmaaleyaasha lasiiyay boos dheeri ah markay asxaabtooda isqoreen.
Bixinta guddi loogu talagalay koox gacansareyaal ah oo si madax-bannaan u xayeysiiya astaantaada - mararka qaarkood waa la iska indhatiraa dilka fursadaha suuq-geynta internetka. Laakiin kuwa aqoonta u leh, suuq-geynta ku-xirnaanta, oo leh faa'iidooyin gaar ah, waa qayb muhiim ah oo ka mid ah istiraatiijiyadda suuq-geynta ee internetka.
Sida infographic u muujineyso, faa'iidada ugu weyn ee suuq-geynta suuq-geynta waa inay tahay khatar hoose, bixiso istiraatiijiyadda suuq-geynta waxqabadka. Sideed uga faa'iideysan kartaa suuqgeynta ku xiran dadaalkaaga?
Tags: affiliatemarketing affiliatexulufadeedaganacsiwareegga wareeggaComputerContent Suuqe-commercesuuq-geynta e-mailkadealerinternetkeywordmacaamiishabrandmarketingnetworkShirka Suuqgeynta InternetkaStore OnlineBixi halkii gujibixintappcKordhinta IibkaSEOServicegaadiidkavektorverkaufenvertriebspartneradvertisingwww
Waan ku faraxsanahay inaan ku turunturooday bartaada maaddaama aan aad uga walaacsanahay inaan raadsado caawimaad si aan uga helo iibinta niche ku xiran. Sidan ayaan sameynayay sanadihii laakiin goobteyda ayaa dhimatay. Waxaan rajeynayaa inay kor u qaadi laheyd degelkeyga ku xiran. Waad ku mahadsan tahay adiga! Waxaan rajeynaynaa inaad aqriso talooyin badan oo xiriir la leh adiga.